खोटाङका दुई जनाद्वारा गौशालाको जङ्गलमा आत्महत्या - Halesi Khabar
खोटाङका दुई जनाद्वारा गौशालाको जङ्गलमा आत्महत्या
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:४३ ।
खोटाङ । खोटाङका एक महिला र पुरुषले आज बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका–८ गौशालास्थित भण्डारखालको जङ्गलमा आत्महत्या गरेका छन् ।
खोटाङको दित्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० घर भई काठमाडौँको बाँसबारी बस्दै आएका ४० वर्षीय जय गिरी र खोटाङको टेम्मा गाउँ बस्ने ३३ वर्षीया उमिता दमाइँ आज बिहानसँगै रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरी निरीक्षक खेम राउतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रातःभ्रमणमा निस्किएका स्थानीयवासीले दिएको सूचनाका आधारमा घटनास्थल पुग्दा उनीहरु झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको गौशाला प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक राउतले चिकित्सक बोलाएरै घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का उठाई दुवै शव परीक्षणका लागि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा लगिएको जानकारी दिनुभयो । उनीहरु दुवै जना खोटाङ कारागार बसेर निस्किएको बुझिएको छ ।
बाँसबारीमा परिवारसँगै बस्दै आएका गिरी मजदूरी गर्दथे । आज बिहान उनकी श्रीमती र छोरा प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए । गिरी सोमबार बेलुका पशुपति घुम्न जान्छु भनेर निस्किएको श्रीमतीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी निरीक्षक राउतले बताउनुभयो ।
खोटाङ बस्दै आएकी दमाइँ काठमाडौँ आएको कारण भने खुलेको छैन । उनी काठमाडौँमा दिदी–भिनाजुकहाँ बसेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विपन्नले निःशुल्क पाउने मिटरबक्सको नाममा रकम अशुल्नेलाई कारबाहीको माग
प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिकाको त्यो कोमल हृदय, आश्रयविहीन खोटाङका तीन बालिकाले पाए अभिभाबकत्व
स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गरायो ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्याकेट
दिक्तेल बजारको मुहार फेरिँदै
१. सहाराबिहिन डम्बरकुमारीलाई वडाकार्यालयको हेरचाह
२. विपन्नले निःशुल्क पाउने मिटरबक्सको नाममा रकम अशुल्नेलाई कारबाहीको माग
३. प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिकाको त्यो कोमल हृदय, आश्रयविहीन खोटाङका तीन बालिकाले पाए अभिभाबकत्व
४. स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गरायो ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्याकेट
५. दिक्तेल बजारको मुहार फेरिँदै
६. डुम्रेधारापानीका २०० घर उपभोक्तालाई लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी